दसैं : कस्तो मासु खान हुन्छ? कस्तो खान हुँदैन? « Chhahara Online
दसैं : कस्तो मासु खान हुन्छ? कस्तो खान हुँदैन?
छहरा अनलाइन - ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार
दसैंमा नयाँ कपडा लगाउने, मिठो खाने, मान्यजनको आशीर्वाद लिने परम्परा छ। खानेकुराको मामिलामा दसैं खसी काट्ने परम्परा नै हो भन्दा फरक पर्दैन। यो समयमा सक्नेले सिंगै खसी र नसक्नेले अर्को परिवारसँग मिलेर भए पनि खसी काटेर मासु जोहो गर्छन्।